Dalalkan Ayaa Ku Dhawaaqay In Jimcada Birri Soon Tahay | Xaqiiqonews
Dalalkan Ayaa Ku Dhawaaqay In Jimcada Birri Soon Tahay
Dalal ay ka mid yihiin Masar, Lubnaan, Ciraaq iyo Tuunis ayaa ku dhawaaqay in jimcada birri ay tahay maalinka koowaad ee Ramadaan.
Qaar ka mid ah masaajiyada muqdisho iyo kuwa ku yaalla gobolada Soomaaliya ayaa laga bilaabay salaadda taraawiixda taasi oo ka dhigan in jimcada ay tahay maalinka koowaad ee ramadaan.
Deegaano ka tirsan gobolada dalka, oo ay ka mid tahay deegaanka ceel-garas ee gobolka Galgaduud ayaa laga arkay bisha, sida lagu sheegay warbaahinta Alshabaab oo iyaga dhankooda sheegay in Jimcada ay tahay maalinka koowaad ee ramadaan.
Sacuudiga iyo dalalka badan oo carab ah ayaa iyaguna ku iclaamiyey in jimcadu ay tahay maalinka koowaad.
Sidoo Kale Aqri..dhaqamada cajiibta ah ee ay sameeyaan wadamada-aduunka bishan ramadaan gudaheeda
dowlado Masar ay ka mid tahayna wax ay sheegeen in habeenimadii arabacada la baadi goobay bisha, lana waayey, iyagoo intaasi ku daray in jimcada ay qasab tahay in la soomo madaama uu buuxsamay soddonka Shacbaan.
Dhankiisa nin madax ka ah diiwaanka suniga ee ciraaq ninkan lagu magacaabo Sacad kambash oo shir jaraa’id ku qabtay baqdaad ayaa yiri “ramadaanka waxa uu bilaabanayaa jimcada, madaama khamiistii bisha la waayey”.
Dhankaas iyo Lubnaan hay’adda daarta fatwada ayaa tiri “hadii bisha la waayey arabacada, khamiis waxa buuxsamaya soddonka shacbaan, jimcadana waa in la soomaa”.